စူပါမင်းသားနေတိုးရဲ့ (၄၅) ရက်ကြာ ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဝင်းဦးနဲ့နေတိုး နှစ်ကိုယ်ခွဲဗွီဒီယိုလေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဒါ့အပြင် ဒီဗွီဒီယိုလေးထဲမှာ ဦးဝင်းဦးအသံတုကို ပီပြင်စွာပြောခဲ့ရုံမက ဦးဝင်းဦးရဲ့ “မမမိုး” သီချင်းကိုပါ အသံတုနဲ့ ပိုင်နိုင်စွာ သီဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ နေတိုးကတော့ ဒီဗွီဒီယိုလေးကို ဖန်တီးရခြင်းက ပရိသတ်တွေကို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ စိတ်အပန်းဖြေပြုံးရွှင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ကာ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဦးဝင်းဦးကို လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ ရိုက်ကူးဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရေ… အသံပိုင်းသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းပါ ပီပြင်လှတဲ့ နေတိုးရဲ့ ဦးဝင်းဦးနဲ့ နေတိုး နှစ်ကိုယ်ခွဲဗွီဒီယိုလေးကို ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။credit cele gabar
ဒီ video လေးကို ဖန်တီးခြင်းဟာပရိသတ်များကြည့်မိတဲ့အချိန်​တိုလေးအတွင်းမှာ စိတ်အပန်း​​ဖြေပြုံးရွှင်​??☺စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်​တော်တို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအမြဲရှိ​နေ​သောအနုပညာရှင်များစွာထဲမှတစ်ချိန်တစ်ခါကရုပ်ရှင်ကို ဆန်းသစ်​အောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့​သော အနုပညာရှင် ကြီးအား ​လေးစား​တန်ဖိုးထားသောစိတ်ဖြင့်သာရိုက်ကူးဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ …?‍♂️ကျွန်​​တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နှစ် ၂၀ အတွင်းလာမဲ့ October လ 13 ရက်​နေ့ဆိုရင်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဟာနှစ် ၁၀၀ ပြည့်​တော့မှာပါ ဒီလိုအချိန်ဒီကာလမျိုးဟာအပြင်မှာပွဲလမ်းသဘင်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဒါ​ကြောင့် မလို့Online ​​ပေါ်မှနည်းမျိုးစုံနဲ့ ​ဖျော်​ဖြေတင်ဆက်မှု​တွေနဲ့သာ​​လော​လောဆယ်​ကျေနပ်​ပေး​စေလိုပါတယ် ..နှစ် ၁၀၀ မှနောင်နှစ်​ပေါင်းများစွာတိုင် ​ခေတ်မီသောတိုးတက်​ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြင့်ပရိသတ်​​တွေကို​​​ဖျော်​ဖြေ​တင်ဆက်မှု​တွေပေးရင်းမြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထာဝရရှင်သန် နိုင်ပါ​စေလို့ဆု​တောင်း​ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ..????ယခု Video မှာ ကိုယ်တိုင်ရိုက် home made? video အတိုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သီဆိုတား​သော" မမမိုး "သီချင်းမှာတေး​ရေး -အလင်္ကာကျော်စွာရွှေပြည်​အေး​ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး မူရင်းအဆိုရှင် ဦးဝင်းဦး ရဲ့အသံကိုအတုလုပ်ပြီး ပြန်တီး?? ပြန်ဆို??ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်?‍♂️?ပရိသတ်များအားလုံး ​ကျန်းမာပျော်ရွှင်​သော ဘဝ​တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါ​စေခင်ဗျာ..သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ များအားထာဝရဦးညွတ်လျှက်ပါ..?‍♂️? ?နွေး​ထွေးမှုများစွာဖြင့် …..​နေတိုး?
Posted by Nay Toe on Saturday, 1 August 2020